Ngabe iselula yakho ingakwazi ukunciphisa isikhathi sakho sokunaka? | Izindaba zamagajethi
Ngokwesifundo esisanda kwethulwa futhi sashicilelwa yiqembu lososayensi nabaphenyi abavela ku Inyuvesi yaseTexas e-Austin (e-United States), kuphethwe ukuthi, ngokusobala, iqiniso elilula le- ukuba neselula eduze kwethu sekuvele kungaphezu kokwanele ukunciphisa amandla obuchopho bethu Ngakho-ke, uma ungomunye walabo bantu abahlala ngokoqobo benamathele emahoreni angama-24 ngosuku noma cishe sonke isikhathi, sekuyisikhathi sokuqala ukukhohlwa ngakho.
Uma isikhashana sifunda iphepha elibhekisa kulolu cwaningo nalapho labo abaphethe ukwenza lo msebenzi bebe namazwana ngazo zonke izinkomba ezibaholele ekushicileleni lolu chungechunge lweziphetho, sithola ukuthi, kusukela ekuqaleni futhi ngaphandle kokuhlolwa, kudinge ukubamba iqhaza okungekho ngaphansi Abasebenzisi bomakhalekhukhwini abangama-800. Umqondo bekuwukuthi ukwazi ukubala ngamayunithi wesikhathi ngendlela enengqondo kakhulu, yingakho kunabaningi ababambe iqhaza kule phrojekthi, kuthatha isikhathi esingakanani ngamunye wabo ukwenza umsebenzi lapho iselula yakhe iseduze.
1 Kulolu cwaningo, ukubamba iqhaza kwabantu abangahleliwe abangama-800 kuye kwadingeka
2 Ithimba labaphenyi lenze izivivinyo ezihlukile zemodeli obekufanele zenziwe ngabahlanganyeli ngeselula eseduze noma ngaphandle kokubona
Kulolu cwaningo, ukubamba iqhaza kwabantu abangahleliwe abangama-800 kuye kwadingeka
Ngokuyinhloko okwenziwe yiqembu labacwaningi e-University of Texas kube yilokho linganisa isikhathi umhlanganyeli ngamunye esivivinyweni asithathile ukwenza umsebenzi othile ukubeka noma cha iselula eduze kwabo. Njengoba kungenzeka ucabanga, ikakhulukazi uma uvame ukusebenza ehhovisi noma ehhovisi ngeselula yakho eseduze, imiphumela ibe mnandi kakhulu futhi ikhanyisela ngokwenzeka ngaso sonke isikhathi.
Isibonelo sezivivinyo ababambiqhaza balesi silingo esikhethekile ababekwa kuzo kwakungeyona enye ngaphandle kokuthi hlala phambi kwekhompyutha bese wenza uchungechunge lwemisebenzi okwakudingeka ukunakekelwa okuphelele. Lezi zivivinyo bezikude kakhulu kubiza kakhulu noma kuyinkimbinkimbi kakhulu, sikhuluma ngokuhlolwa okuyisisekelo ososayensi abalinganisa imininingwane ethile njengako umthamo wabahlanganyeli ngamunye wokuqukethe nokucubungula idatha nganoma yisiphi isikhathi, ukuhlolwa okusebenzela ukuhlola ikhono lokuqonda labasebenzisi abazenzayo.
Ithimba labaphenyi lenze izivivinyo ezihlukile zemodeli obekufanele zenziwe ngabahlanganyeli ngeselula eseduze noma ngaphandle kokubona
Ngaphambi kokuqala uhlolo ngalunye, umhlanganyeli ngamunye uthole ama-oda ahlukile wokuthi kufanele uyibeke kanjani ifoni yakho ephathekayoNgale ndlela, abanye bekufanele babeke ngqo phambi kwabo ngenkathi, kunalokho, abanye abasebenzisi ababambe iqhaza bekufanele bakubeke etafuleni kepha isikrini sibheke phansi, ephaketheni labo, abanye bekufanele bathulise ukuphela kwabo ...
Imiphumela yalokhu kuhlolwa, njengoba sishilo emigqeni edlule, icace bha kusukela lapho bonke abasebenzisi ababengenayo i-smartphone yabo nabo bakudlula kude bonke abanye ngokuya ngesikolo esitholakele. Ngamaphuzu aphansi sithole abasebenzisi abagcina umakhalekhukhwini wabo ephaketheni labo ngenkathi, endaweni yokugcina nangamaphuzu aphansi kakhulu abasebenzisi ababenedivayisi etafuleni. Le miphumela iphakamisa ukuthi amandla womqondo womuntu nokusebenza kwakhe kwengqondo kuncishiswe kakhulu ukutholakala nje kwefoni ephathekayo etafuleni.
Ngokuya ngezitatimende ezenziwe ngemuva kokushicilelwa kwemiphumela etholwe ngelinye lamalungu akha iqembu elenze lokhu kuhlolwa, Iwadi lika-Adrian, singaphetha ngokuthi:
Sibona umkhuba oqondile ophakamisa ukuthi njengoba i-smartphone iya ibonakala ngokwengeziwe, ikhono lokuqonda labahlanganyeli liyancipha. Akukhona ukuthi ababambiqhaza baphazamisekile ngoba bebethola izaziso ezingcingweni zabo, ukuthi ubukhona nje be-smartphone bebwanele ukunciphisa ikhono labo lokuqonda.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izaziso » Ngabe iselula yakho ingakwazi ukunciphisa isikhathi sakho sokunaka?
IMidas Connect, eyokugcina ekuxhumekeni kwezimoto ezingaxhunyiwe